Raw Tamoxifen Citrate pombi Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Tamoxifen Citrate powder isati iri nhengo isina simba yakanyanya ine antiestrogen. Anti-estrogen inoshanda nekudzivirira migumisiro yehomoni isrogen mumuviri. Estrogen inogona kukonzera kukura kwemamwe marudzi emakumbo emvere. Tamoxifen inogona kudzivisa kukura kwemakumbo anoteerera kune estrogen.
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) video
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) Tsanangudzo
Raw Tamoxifen Citrate powder is citrate salt ye an antineoplastic nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM). Tamoxifen mukukwikwidza inhibits kusungirwa kwe-estradiol kusvika kune-estrogen receptors, nokudaro kudzivirira kuti mutezo usasungwa kusvika kune-estrogen-response element pane DNA. Chigumisiro chacho kuderedzwa kweDNA kushandiswa uye mashandisirwo emagetsi kune esrogen. Mukuwedzera, tamoxifen-inoronga kuve nekugadzirisa kukura kwezvinhu B (TGFb), chimwe chinhu chinodzivisa chiremera chekukura kwekukura, uye kuderedza-kuronga insulini-kufanana nekukura 1 (IGF-1), chinhu chinokonzera kenza yemazamu kuwedzera . Tamoxifen uyewo pasi-inorondedzera manzwiro eprotein kinase C (PKC) nenzira inotarisirwa neipi, inhibiting transduction signal uye kubudisa kusagadzirisa zvinokonzera mumaronda zvakadai sevarwere glioma nezvimwe zvinokonzera zvinopisa PKC.
Raw Tamoxifen Citrate inoshandiswa poda kushandisa kurapwa uye kudzivirira kweestrogen receptor positive kanhi yepamu. Tamoxifen inoshanda se-anti-estrogen (inhibiting agent) mumuviri wekumusoro, asi seestrogen (inokurudzira mujeri) mucholesterol metabolism, bone mashoma, uye kushandiswa kwesero mune endometrium.
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) Specifications
Product Name Raw Tamoxifen Citrate powder
Kemikari Name Istubal; Tamoxifen,
muchiso Name Nolvadex
Molecular Wsere 563.647 g / mol
Kunyorera Point 97 ° C
Biological Half-Life Kupera kwetamoxifen plasma zvakanyanya biphasic ine hafu yekupera kweupenyu hupenyu huri pakati pe5 kune mazuva 7. Nhauriro yehupenyu hweN-desmethyl tamoxifen mazuva 14.
ruvara Mucheka wakachena kana usina kuchena
Solubility mvura inogadziriswa 0.000167 mg / mL pa 25 ° C
APane shandisa kurapwa nekudzivirira kweestrogen receptor positive kenza yemazamu.
Chii Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1)?
Tamoxifen rudzi rwehomoni inorwara inozivikanwa sekus selegengen receptor modulator (SERM). Imwe yezita rezita re tamoxifen ndiNolvadex.
Iyo Yakakura Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) mabasa
Tamoxifen inoshanda nekubatanidza kuestrogen estrogen muzamu masero kuitira kuti estrogen isasagoni kuvasunga. Nokudzivirira isrogen muzvipfuva zvinosungirirwa kune zvinogamuchirwa, tamoxifen inopedza kukura uye kubereka kwemasero echetere emusero eesrogen.
Tamoxifen Citrate powder is citrate salt ye an antineoplastic nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM). Tamoxifen mukukwikwidza inhibits kusungirwa kwe-estradiol kusvika kune-estrogen receptors, nokudaro kudzivirira kuti mutezo usasungwa kusvika kune-estrogen-response element pane DNA. Chigumisiro chacho kuderedzwa kweDNA kushandiswa uye mashandisirwo emagetsi kune esrogen. Mukuwedzera, tamoxifen-inoronga kuve nekugadzirisa kukura kwezvinhu B (TGFb), chimwe chinhu chinodzivisa chiremera chekukura kwekukura, uye kuderedza-kuronga insulini-kufanana nekukura 1 (IGF-1), chinhu chinokonzera kenza yemazamu kuwedzera . Tamoxifen uyewo pasi-inorondedzera manzwiro eprotein kinase C (PKC) nenzira inotarisirwa neipi, inhibiting transduction signal uye kubudisa kusagadzirisa zvinokonzera mumaronda zvakadai sevarwere glioma nezvimwe zvinokonzera zvinopisa PKC.
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) Dosage
Verengai Mishonga yeMishonga inopiwa nemufarisi wako usati watanga kushandisa tamoxifen uye nguva imwe neimwe yaunowana. Kana iwe uine mibvunzo, bvunza chiremba wako kana wemishonga.
Tora mishonga iyi nemuromo kana usina kudya, kazhinji kamwe kana kaviri zuva rega rega kwemakore 5, kana sekurairwa nachiremba wako. Zuva rega rega hukuru kupfuura 20 milligrams inowanzoparadzaniswa nehafu uye inotorwa kaviri pazuva, mangwanani nemanheru, kana sezvinorayirwa nachiremba wako. Kana iwe uri kushandisa mvura yacho, edza muyero wacho uchinyatsoshandisa uchishandisa chiyeuchidzo chakakosha / spoon. Usashandisa imba yepuni nokuti iwe haugoni kuwana chirongwa chakakodzera.
Nhamba yakabva pahutano hwako uye kupindura kwerapi.
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1) zvinobatsira
Tamoxifen ndiro chisarudzo chekutanga kuvakadzi ve-foremenopausal uye ichiri chisarudzo chakanaka chevakadzi ve postmenopausal vasingagoni kutora aromatase inhibitor.
Deredza kudengenyeka kwekenza yemazamu inodzoka ne40% kusvika ku50% mumadzimai ekuma postopaopausal uye ne30% kusvika ku50% mumadzimai ekutanga
Deredza dambudziko rekenza mutsva inokura mune imwe yepamu neyese ye 50%
Dzorera huru, hormone-receptor-positive kanamari yepamu mushure mekuvhiyiwa
Chinononoka kana kumira kukura kana kufambira mberi (metastatic) hormone-receptor-positive mazamu epamuviri mumadzimai maviri e-pre-postmenopausal
Dambudziko rekenza yepabonde riri pasi pevakadzi vari nehuwandu hwepamusoro-huwandu hwehutachiwana hwehutachiwana asi vasina kuonekwa
Tamoxifen inopa mamwe mararamiro ehutano asingabatanidzi mukurapa kenza. Nemhaka yokuti iri SERM, inosarudza kuvhara kana kuita zvinoitwa neserogen pane mamwe masero. Kunyange zvazvo tamoxifen inodzivirira chirongwa chewesrogen pazamu mazamu, inoita kuti isrogen ishande mumasero epafu uye eropa. Saka tamoxifen inogona:
kubatsira kubvisa mapfupa kurasikirwa mushure mekupera kwemwedzi
Tenga Tamoxifen Citrate powder kubva kuBuasas.com